Ampidino Game ho an'ny Windows
GRID Autosport no lalao farany aminny andiany GRID novolavolaini Codemaster, fantatra aminny traikefany aminny lalao hazakazaka. Ao aminny GRID Autosport, izay iray aminireo ohatra mahomby indrindra aminny sokajy lalao hazakazaka, ny mpilalao dia miditra aminny karier-dry zareo manokana ary mandroso tsikelikely aminny tohatra asa. Ny...
Nemezis: Mysterious Journey III dia lalao fitsangatsanganana ankamantatra izay ahitanny mpizahatany roa, Bogard sy Amia, ao anaty andiana hetsika miafina. Vahao ny piozila manaitaitra ary fantaro ny tantara iray izay tsy ho tantinao mandra-pahatonganny farany. Ampidino ny Nemesis: Journey miafina III Mandehandeha ary mahita: tontolo...
F1 2021 dia lalao fifaninanana Formula 1 novolavolaini Codemasters. F1 2021 Download Ny tantara rehetra dia misy fiandohana aminny F1 2021, ny lalao ofisialinny 2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Ankafizo ireo fiasa vaovao mahavariana anny F1 2021, ao anatinizany ny traikefa nahafinaritra nampitondraina ny Braking Point, ilay...
House Flipper no lalao famolavolana trano be mpitia indrindra aminny finday (Android APK sy iOS) ary sehatra PC. Ao aminny lalao simulation malaza, mividy trano ianao, manamboatra azy ireo, manatsara ny trano rava. Avy eo apetrakao amidy. Asa maro no miandry anao ao aminny House Flipper, ny lalao fananganana, famolavolana, fivarotana...
Sintomy ny Engine Engine Cheat Engine dia programa cheat cheat anny matihanina novolavolaina ho loharano misokatra, ary ny APK dia azo ampiasaina aminny PC Windows 10 tena tadiavina ihany koa. Azonao atao ny manelingelina mivantana ny toe-javatra sarotra aminny lalao aminny Cheat Engine, izay ahafahanao manova ny lalao ataonao eo...
FIFA 22 no lalao baolina kitra tsara indrindra azo lalaovina aminny PC sy consoles. Manomboka aminny teny filamatra Powered by Football, EA Sports FIFA 22 dia manakaiky ny lalao aminny fiainana tena izy miaraka aminny fanatsarana ny lalao fototra sy ny vanim-potoana izay mitondra fanavaozana aminny fomba rehetra. FIFA 22 PC dia mandeha...
Vonona ve ianao aminny kianja filalaovana stunt fiara? Mirary fahafinaretana aminity lalao mitaingina multiplayer maimaim-poana aminny cross-platform ity! Mandroaka kamio, tanky ary fiara mahatalanjona kokoa aminny tontolo malalaka misokatra. Ambaratonga, mandraisa anjara aminny hetsika, mahazoa vola madinika, sokafy ny fiara vaovao ary...
Warplane Inc. dia lalao simulator sidina 2D ahafahanny mpilalao mianatra momba ny tantaranny ady, ny tantaranny maherifony sy ireo tra-boina, ary koa ny fampandrosoana ny fiaramanidina miaramila. Mianara manidina, mamita iraka, mitady vola hanatsarana ny fiaramanidinao sy ny fitaovam-piadiana. Azonao atao mihitsy aza ny mahazo baomba...
Andro fotsy: Sekoly iray antsoina hoe Labyrint dia azo faritana ho lalao mampihorohoro aminny karazana horohoro izay misy ny seho hitsapa ny hozatrao. Andro Fotsy: Sekoly antsoina hoe Labirinty, kilalao vita Koreana, dia momba ireo hetsika izay nanomboka vanim-potoana fialantsasatra. Ilay maherifontsika lehibe, Hee-Min Lee, dia...
Ny Monster Inside dia azo faritana ho toy ny lalao mpitsangatsangana novelom-bokatra izay manambatra ny rivo-piainana mahery miaraka aminny tantara manaikitra. Ao aminny The Monster Inside, lalao izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainao, dia mpitsikilo manokana izahay ary manandrana mamaha ny tsiambaratelonny...
Flightless dia azo faritana ho toy ny lalao an-tsehatra izay manintona ireo mpilalao aminny taona rehetra, mahatonga azy ireo hieritreritra sy hampifaly. Manomboka fitsangatsanganana maro loko ao aminny Flightless izahay, lalao izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainao. Aminity traikefa nahafinaritra ity dia...
Tactical Monsters Rumble Arena dia lalao milalao anjara toerana izay mamela anao hampiofana ny biby goavam-beo aminny alàlanny fampisehoana biby goavambe. Ao aminny Tactical Monsters Rumble Arena, lalao miady aminny monster izay azonao atao ny misintona sy milalao maimaim-poana aminny solosainao, manangana ekipanao goavam-be ianao ary...
Ireo mpiaro ani Tetsoidea II dia azo faritana ho lalao RPG izay manambatra ireo endri-tsoratra mahafatifaty aminny tantara iray mahaliana. Ireo mpiaro ani Tetsoidea II, lalao milalao andraikitra azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainanao, dia momba ny tantaranny mpiara-mianatra roa kilasy izay mpiara-mianatra. Ireo...
Hero Plus dia azo faritana ho lalao MMORPG miaraka aminny haavonny kalitao toy ny lalao malaza toy ny Knight Online. Hero Plus, lalao izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainao, dia tsy lalao vaovao. Ity lalao ity, izay navoaka taminny 2006, dia navoaka tao aminny Steam ary natolotra ho anireo mpampiasa Steam. Hero...
Supreme Destiny dia lalao MMORPG izay afaka mifanaraka aminny antenainao raha manana fotoana malalaka sy solosaina taloha ianao. Ao aminny Supreme Destiny, lalao milalao andraikitra an-tserasera izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainao, dia mamorona mahery fo izahay ary mitsidika ny tontolonny nofinofinilay...
Runescape dia lalao milalao andraikitra an-tserasera izay isanny lalao MMORPG mahomby indrindra eto an-tany. Runescape, MMORPG ahafahanao misintona sy milalao maimaim-poana aminny solosainao, dia navoaka voalohany taminny taona 2001 ary nahazo ivon-toeranny mpilalao lehibe. Tao anatinizay taona manaraka izay dia navaozina ny motera...
FEN: Prologue dia azo faritana ho toy ny lalao tafavoaka velona izay manambatra sary Retro miaraka aminny lalao mahafinaritra. Ao aminny FEN: Prologue, RPG - lalao filalaovana ahafahanao misintona sy milalao maimaim-poana aminny solosainanao, misolo toerana ny maherifo iray izay, taorianireo hetsika tsy nampoizina, dia nahita azy tao...
A Raven Monologue dia lalao mampientam-po mety tianao raha tianao ny lalao tantaraina tantara. Nahita olona mahery fo tena mahaliana ao aminny A Raven Monologue izahay, lalao iray izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainao. Tsy mila mahay teny anglisy ianao hilalao A Raven Monologue, izay lalao fanandramana,...
Dord dia lalao fitsangatsanganana maimaim-poana. Ilay studio lalao, fantatra aminny anarana hoe NarwhalNut ary fantatra aminny lalao kely nefa mahomby mandraka androany, dia namoaka ny lalao antsoina hoe Dord. Dord, izay momba matoatoa kely ary mitantara ny tolona nataony mba hamonjy ny fanjakany manokana, dia nahavita nanintona...
Ny Legend of Kasappa dia lalao fitsangatsanganana izay azo andramana maimaim-poana aminny solosaina. Mametraka mpamorona lalao am-polony amina hazakazaka 48 ora ary te-hamorona lalao azo lalaovina aminny lohahevitra manokana ao anatinny 48 ora, GGJ koa dia nahavita namokatra famokarana maro samihafa ho anny tontolonny lalao hatreto....
I Necken dia lalao fanaovana traikefa nahafinaritra izay mampiditra ny mpilalao anaty ala anaty ala any Soeda. Necken, novolavolainny studio lalao antsoina hoe Joccish, izay mamolavola lalao tsy miankina ary atolotra maimaimpoana ho anny mpilalao, dia atao any aminny alani Soeda. Ilay lalao, izay anenjehantsika zavaboary...
Ny Alpha Device dia tantara an-tsary na lalao traikefa nahafinaritra azonao iainana maimaim-poana. Nalefanny kintana Stargate David Hewlett, The Alpha Device dia hanokatra varavarana iray hafa niainana ho anao. Mamorona tantara mbola tsy henonao na noeritreretinao taminny habakabaka lalina, lavitra ny zanakolombelona, ​​i Xiotex dia...
Final Fantasy XV Demo dia endrika demo anny Final Fantasy XV azo alaina maimaim-poana aminny Steam. Ny andiany Final Fantasy, izay navoaka voalohany taminny 1987, dia nitondra tsiro hafa taminny lalao milalao andraikitra ary tianny mpilalao Japoney indrindra. Raha ny Final Fantasy 7, izay navoaka taminny faranny taona 90, dia...
Banyu Lintar Angin - Little Storm dia lalao tantara an-tsarimihetsika notarihin-tantara izay mikasa ny hanome traikefa lalao milamina. Ao aminny Banyu Lintar Angin - Little Storm, lalao izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny solosainanao, dia mamonjy ny faranizao tontolo izao izahay ary manatri-maso ny tantaranny fiainana...
The Awesome Adventures of Captain Spirit dia karazana lalao mahafinaritra azonao atao maimaim-poana aminny Steam. Dontnod Entertainment, izay namoaka famokarana izay tianireo tia lalao mampientam-po miaraka aminny Life Strange izay navoaka teo aloha, dia manohy ny fiaraha-miasa aminny Square Enix miaraka aminny lalao The Awesome...
Ny A Rite from the Stars dia lalao iray an-tsehatra navoakanny Phoenix Online ary manintona ny saina aminny firafiny samihafa. Niorina tao aminny Nosy Mystical of Kaikala, fonenanny foko Makoa, A Rite from the Stars dia miresaka momba ani Kirm, zazalahy tony iray voafantina taminireo namany mba ho lasa angano. Mba hahombiazani Kirm...
League of Angels 3 (LoA 3) dia lalao MMORPG an-tserasera maimaim-poana izay azonao atao aminny lalao Flash aminny alàlanny Internet browser. Ny famokarana, izay nanjary safidinny mpilalao maro noho ny tsy fahafahanny fisolokiana, manintona ireo mpilalao aminny tantarany mahomby. LoA 3, izay tena mora fehezina noho ny karazana Idle Game,...
Immortal: Unchained dia iray aminireo lalao farany aminny karazana RPG hetsika ultra-hardcore. Ao aminny lalao andraisantsika ny asanny fitaovam-piadiana velona, ​​dia miditra aminny ady lehibe aminireo zavaboary ratsy fanahy izay manao ezaka tsy mitsahatra isika hamarana izao tontolo izao. Izahay dia mizaha ireo tontolo miafina...
Hafahafa ny fiainana, ny lalao traikefa an-tsehatra novolavolaini DONTNOD Entertainment ary mihazakazaka manomboka aminny loka ka hatraminny loka, dia nalaza be taminny tetikady famoahana sy ny tantara. Ny famokarana, izay navoaka taminny ampahany taminny vidiny mora indrindra, dia nitantara ny tantarani Maxine Caufield, izay tia maka...
Guardians of Ember dia fifangaroanny Hack & Slash ary MMO maimaim-poana. Ao aminny lalao izay miaraka mampiaraka ny nofinofy sy ny famonoana olona, ​​miditra ao aminny tafiky ny olombelona ianao, neias, elf ary dwarves ary miady aminireo mpanafika ratsy fanahy ho mpiambina. Ny dia lavitra feno loza dia miandry anao ao Olyndale,...
Dauntless dia lalao aminny filalaovana asa an-tserasera novolavolaini Phoenix Labs ary navoakanny Epic Games. Manatevin-daharana ny fihazana ianao aminny lalao rpg haingam-pandeha izay azonao sintonina sy milalao maimaim-poana aminny PC aminny alàlanny fivarotana Epic Games. Raha tianao ny lalao an-tserasera velona velona dia tokony...
Vonona hanao traikefa nahafinaritra ianao izay hahatratra ny tamponisanny fahafinaretana? Hahita ny fahafinaretana Metin 2 tadiavinao ao Nors ianao, izay amboarina misaraka ny rafitra tsirairay. Ny NorsMt2 dia tsy ho mpizara Metin 2. fa koa famokarana MMORPG kalitao. Hanomboka ny lalao aminny alalànny fitaovana bonus sy fitaovana...
DRAGON QUEST BUILDERS 2, ilay RPG fananganana vato manakana avy aminny mpamorona andian-dahatsoratra DRAGON Yuji Horii, mpamorona endrika Akira Toriyama ary mpamorona Koichi Sugiyama - dia nivoaka ho anireo mpilalao Steam. Ny kinova Steam dia misy ny atiny Season Pass navoaka taloha taminny kinova console: Hotto Stuff Pack,...
Genshin Impact dia lalao anime action rpg tianny PC sy ny mpilalao finday. Ny lalao filalaovana andraikitra maimaimpoana novolavolaina sy navoakanny miHoYo dia manasongadina tontolo iainana misokatra sy rafitra ady miady aminny hetsika izay mampiasa majika, fifandimbiasan-toetra ary fanangonam-bola aminny lalao gacha ho anireo mpilalao...
Ny Lord of the Rings: Gollum dia lalao mihetsiketsika mifototra aminny tantara izay aingam-panahy avy aminilay sarimihetsika malaza The Lord of the Rings. Ny Tompon ny Rings lalao, mandroso ary navoakanny Daedalic Entertainment, misarika ny saina sy ny Tiorka teny fanohanana. The Lord of the Rings: Gollum, mbola eo an-dàlam-pamolavolana,...
H1Z1 dia iray aminireo solontena mahomby indrindra aminny lalao battle royale, izay nanjary nalaza be noho ny lalao toy ny PUBG ankehitriny. Ao aminny H1Z1, lalao fivezivezena an-tserasera, mandeha irery na aminny ekipa ny mpilalao. Rehefa manomboka ny lalao isika dia voaroaka avy any ambony mankany aminny sari-tany misokatra...
Riders of Icarus dia lalao milalao andraikitra an-tserasera izay mitondra fanavaozana mahaliana aminny karazana MOORPG. Ao aminny Riders of Icarus, lalao iray azonao sintonina sy hilalaovana maimaim-poana aminny solosainanao, dia vahininizao tontolo izao izahay izay misy dragona mahafinaritra toy ny dragona, hery majika ary mpiray...
Secret Neighbor dia kinova marobe anny Hello Neighbor, iray aminireo lalao mampihorohoro mangingina indrindra ao aminny PC sy finday. Sintomy ny mpiara-monina miafina Secret Neighbor dia lalao mahatsiravina ara-tsosialy marobe izay andianà mpanakorontana manandrana manavotra ny sakaizany aminny lakaly manaitra ny mpiara-monina aminy. Ny...
Outer Wilds dia lalao mistery misokatra an-tany novolavolaini Mobius Digital ary navoakani Annapurna Interactive. Ao aminny lalao, manolo ny toetra amam-panahy ianao izay mandinika ny rafitry ny masoandro mihitsoka ao anaty tadim-potoana 22 minitra ka mitarika ny masoandro mandeha supernova. Outer Wilds, malaza be mpitsikera ary nahazo...
Swords of Legends Online dia lalao mmorpg ao anaty tontolo nofinofy mahatalanjona miaraka aminny mekanika ady sarotra sy tantara tsy manam-paharoa mifototra aminny angano sinoa. Sintomina Swords of Legends Online Jereo izao tontolo izao miaraka amina kilasy 6 samihafa, mandray anjara aminny lalao epic PvP, mandray trano-maizina sarotra...
Satria demo io, voafetra ihany ny safidintsika sy ny fiara azontsika ampiasaina. Aminny alàlanny fidirana aminny faritra Quick Race, azontsika atao ny milalao ny iray aminireo hazakazaka telo eto, ny roa aminizy ireo dia ao aminny Sprint ary ny iray kosa dia aminny maody Speedtrap. Ao aminny Challenge, izay ampahany hafa azo lalaovina,...
Ny rakitra GTA San Andreas 100% Save dia karazana patch azonao ampiasaina hamitana tanteraka ny lalao. Aminny fisintomana ny rakitra GTA San Andreas 100% Save, azonao atao ny mamita ny lalao eo noho eo ary mandehandeha eranny tanàna araka izay irinao. GTA San Andreas 100% Vonjeo Download Aorianny fametrahana ny rakitra GTA San Andreas...
Io no patch farany ho anny lalao antsoina hoe Hitman Blood Money. Noho io patch io dia namboarina ny bibikely sy ny lalao ary nitombo ny fahafinaretanao milalao. Fiovana natao taminny patch: Safidy tabilao vaovao Nanala ny olanny voaroaka rehefa voaroaka. Aloky ny zava-misy. Ny olana aminny fiverenana aminny birao dia nesorina....
Ity patch ity, izay navoaka ho anny lovantsofina vaovao Need For Speed, Most Wanted, dia nametraka lesoka maro taminny lalao, nefa nanidy ny fahalemena maro ihany koa, indrindra aminny maody Multiplayer, ary nanala ireo lesoka sy zava-tsarotra....
Need For Speed ​​Carbon patch dia misy add-ons hamenoana ny traikefa filalaovana fanamarihana: Raha te hilalao ny lalao an-tserasera ianao, raha tsy mipaoka ianao dia tsy hanana hazakazaka aminny Internet. Miaraka aminny EA Messenger, afaka mandefa sy mandray hafatra eo noho eo ianao aminny resaka an-tserasera. Miaraka aminny fisavana...
Bot fonosana ho anny Half-Life sy ny mods. Aminity programa ity dia azonao atao ny milalao Half-Life, Team Fortress, Opposing Force sns aminny solosaina nefa tsy mifandray aminny tamba-jotra. afaka milalao ianao. Misaotra ny configurability, azonao atao koa ny manitsy ny haavonny fahasahirananireo bot, ny anarany ary na ny fiteniny. ...